तपाईंलाई कोरोना संक्रमण भए के गर्ने, के नगर्ने ? पढ्नुहोस् डा. रवीन्द्र पाण्डेका ४० सुझाव - Health Chautari Health Chautari
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:४२
Published on : १ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:४२
होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्ति घरबाहिर नजाने । पानी प्रशस्त खाने । ज्वरो आएमा वा टाउको / शरीर दुखेमा पारासिटामोल खाने । एकजना चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहने । अस्पताल जानुपर्‍यो भने सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्ने । एम्बुलेन्स बोलाउने ।
सास फेर्न गाह्रो भए, छाती दुखेमा वा दबाब महसूस भए, निद्रा लागिरहे, खाना खान नसके कन्फ्युजन भए तथा ओठ वा अनुहार निलो भए तुरुन्तै अस्पताल जाने ।
घरका व्यक्तिसँग कुरा गर्दा न्युनतम ६ फिटको दुरी कायम गरेर तथा दुवै तर्फबाट मास्क लगाएर कुरा गर्ने । एक्लै बस्दा मास्क लगाउनु पर्दैन । २ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मास्क प्रयोग गर्न हुँदैन ।
थाल, गिलास, चम्चालगायतका भाँडाकुँडा, टावेल, बेड कभर, बाथरुममा सामान सेयर नगर्ने । आफूले धोएर छुट्टै प्रयोग गर्ने ।
आफ्नो कोठा, बाथरुम, कपडा, बेडसिट आदिलाई नियमित संक्रमणविहीन बनाउने । अन्य व्यक्तिले संक्रमितले प्रयोग गरेका बाथरुम, बेडरूम, कपडा तथा भाँडा सफा गर्नुपरेमा राम्रो खालको मास्क, फेसशिल्ड, चस्मा तथा पन्जा लगाएर सफा गर्ने । फोन, रिमोट कन्ट्रोल, ढोकाको चुकुल, ह्याण्डील, टेबल, कम्प्युटरको किबोर्ड आदिलाई सफा गरिरहने ।
कुनै पनि औषधि सेवन गरिरहेको संक्रमितले औषधि नछोड्ने ।
झ्याल खोलेर तथा सकभर हावा र घाम लाग्ने कोठामा बस्ने ।
छुट्टै बाथरुम नभएमा साझा बाथरुम पहिले संक्रमितले प्रयोग गर्ने । उक्त बाथरुमलाई डिटरजेन्टले राम्रोसँग सफा गर्ने । बाथरुमका ह्याण्डिल, चुकुल आदिलाई डेटोल पानी वा स्प्रिट कपासले राम्रोसँग सफा गर्ने ।
बच्चालाई दूध चुसाउँदा कोरोना संक्रमण सरेको प्रमाण छैन । आमाको संसर्ग तथा श्वासबाट संक्रमण सर्न सक्ने भएकाले सकभर दूधलाई निचोरेर कुनै भाँडोमा राख्ने र संक्रमण नभएको व्यक्तिले चम्चाले खुवाउने । यसो गर्न सम्भव नभए बच्चाको उमेर अनुसारको फार्मेसीमा पाउने पाउडर दूध तथा आहार खुवाउने ।
आफूले प्रयोग गरेको फोहोरलाई छुट्टै ब्यागमा राख्ने, ब्यागको मुख राम्रोसँग बाँध्ने, कोठाको एउटा कुनामा राख्ने अनि ७२ घण्टापछि मात्र फोहोर संकलन गर्ने ठाउँमा राख्ने ।
२ हप्तासम्म एक्लै कोठामा बस्न गाह्रो हुनसक्छ । यो समयलाई सजिलो र सिर्जनशील बनाउने प्रयत्न गर्ने । आफन्त तथा साथीसँग फोन तथा इन्टरनेटमार्फत कुराकानी गर्ने, युट्युबमा राम्रा चलचित्र हेर्ने, योग, ध्यान तथा प्राणायाम गर्ने । पुस्तक पढ्ने । आफ्ना लक्षण तथा अनुभव लेख्ने । आफ्नो रुचि अनुसार आर्ट गर्ने, कविता लेख्ने, कथा लेख्ने ।
हामीले जस्तो खाना खान्छौं, हाम्रो स्वास्थ्य पनि त्यस्तै हुन्छ । सन्तुलित भोजन गर्ने व्यक्तिको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन्छ । जसले गर्दा धेरै रोगसँग लड्ने प्रचुर क्षमता हुन्छ । विभिन्न भेराइटीका तथा प्रशोधन नगरेका खानामा प्रोटिन, क्यालोरी, भिटामिन, खनिज तत्व तथा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व प्राप्त हुन्छ । प्रशस्त पानी पिउने तथा प्राकृतिक भोजन गर्नाले मोटोपन, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षघात तथा केही क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ।
मौसमी फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, बदाम तथा प्रशोधन नगरेका अन्न, दूध, दही, माछामासु, अण्डा आदिको सेवन गर्ने ।
पानीले पोषक तत्वलाई रगतमा पुर्‍याउने, शरीरको तापक्रम सन्तुलनमा राख्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थलाई निष्काशन गर्ने, जोर्नी तथा अन्य अंगलाई आद्र गराउँछ, तसर्थ दिनको ३-४ लिटर पानी पिउनु जरुरी हुन्छ । पानीसँगै फलफूलको जुस, सुप, मनतातो कागती पानी, हर्बल चिया, ब्ल्याक टी, हल्का कफीको सेवन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै रसिला फलफूल, काँक्रो, खर्बुजा आदिको पनि सेवन गर्न सकिन्छ ।
सकभर अनस्याचुरेटेड फ्याट जस्तै मकैको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखीको तेल, ओलिभ आयल, एल्मोंड आयल, एभोकाडो तथा माछाको तेल सेवन गर्नुपर्दछ । बोंसो, नौनी, क्रिम, चिज तथा नरिबल तेललाई कम प्राथमिकता दिनु स्वस्थकर हुन्छ ।
मासुमा सकभर माछा तथा लोकल चिकेन स्वस्थकर हुन्छ । रातो मासु कम खानु हितकर हुन्छ । प्रशोधन गरिएको मासु सेवन नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नुन र चिनी निकै कम खानु पर्दछ । दिनको ५ ग्रामभन्दा कम अर्थात सानो चम्चाको १ चम्चाभन्दा धेरै नुन खानु हुँदैन । बजारमा पाइने स्न्याक्स ( चिप्स आदि ) को सेवन गर्नुहुँदैन । अत्यधिक चिनीको मात्रा हुने कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, चकलेट, केक, कुकिज तथा प्याकेटका जुसको सेवन नगर्नु लाभदायक हुन्छ ।
एकैपटक धेरै खानुको साटो थोरै तर पटकपटक खानु उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा पाचनको समस्या हुँदैन ।
कार्बोहाइड्रेट कम तथा प्रोटिन बढी भएको खानाले कोभिडका बिरामीलाई निकै फाइदा गर्छ ।
सागसब्जी तथा फलफूलमा बिटा क्यारोटिन, भिटामिन सी तथा अन्य आवश्यक भिटामिन पाइन्छ । ब्रोकाउली, पालुंगो, ठूलो खुर्सानी, च्याउ, गोलभेँडालगायतका हरिया सागसब्जी धेरै फाइदाजनक हुन्छन् ।
बेसार, अदुवा, पिपली, मरिच, अमला, तुलसी पत्र, लसुन, प्याज, ज्वानो, तील, धनियाँलगायत भान्सामा प्रयोग हुने मरमसलामा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने तत्व तथा आलस, फर्सी, खर्बुजा, मुंग्रेलो, सूर्यमुखी आदिमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन ई हुन्छ । त्यस्तै दहीलगायत फर्मेंन्टेड फूडमा पाइने प्रोबायोटिकले निकै फाइदा गर्दछ ।
संक्रमित व्यक्तिलाई निद्राको ठूलो महत्त्व छ । रातिमा ८ देखि ९ घण्टा सुत्नाले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ । निद्रा कम भएमा थकाइ लाग्नुको साथै मस्तिष्कको गतिविधिलाई नकारात्मक असर गर्दछ । निद्राबाट उत्पादन हुने मेलाटोनिन हर्मोनले इम्युनिटी पावर बढाउँछ । दिउँसोको न्याप (अल्पनिद्रा ) पनि प्रशन्नकारक हुन्छ ।
नियमित रूपमा व्यायाम गर्नाले शरीरबाट टक्सिन बाहिर निस्किने, स्टामिना बढ्ने, शरीरको चयापचय अर्थात् Metabolism मा सुधार हुने, Endorphin Hormone secretion हुने लगायतका कारण इम्युनिटी पावर वृद्धि हुन्छ । संक्रमित व्यक्तिले युट्युब च्यानल हेरेर वा नाचेर पनि पसिना आउन्जेल व्यायाम गर्न सकिन्छ । लक्षण देखिएका वा कमजोर बिरामीले हल्का व्यायाम मात्र गर्नुपर्दछ ।
आइसोलेसनमा बस्दा मनमा नकारात्मक विचार आउन सक्छन् । कोरोना संक्रमणको कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुन्छ कि ? समाजले अर्कै नजरले हेर्छ कि ? पछिसम्म असर रहन्छ कि ? आदि प्रश्न मनमा ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । यस्ता नकारात्मक विचार, चिन्ता तथा तनावले कर्टिसल हर्मन उत्पन्न गर्दछ जसले गर्दा रोगसँग लड्न शरीर निरुत्साहित हुन्छ । योग, ध्यान, नाचगान, मोटिभेसनल स्पीच श्रवण आदिले मनलाई शान्त गर्छ । सकारात्मक सोच र आत्मबलले संक्रमण निको गर्न मद्दत गर्दछ ।
नाकलाई सफा गर्न मनतातो पानीको जलनेती गर्ने वा मनतातो नुनपानीले दिनमा २ पटक नाकलाई भित्रसम्म सफा राख्ने ।
नुन र बेसार मनतातो पानीमा राखेर वा ओभिडोन गार्गलले दिनमा २-३ पटक कुल्ला गर्ने ।
मनतातो पानीमा पदिनाको झोल वा सन्चो २ थोपा राखेर दिनमा २ पटक बाफ लिने ।
दैनिक नुहाउने, सफा कपडा लगाउने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका प्रोटोकल पालना गर्ने । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जारी गरेको प्रोटोकल (नेटमा उपलब्ध छ) अनुसार आहार, बिहार, आचार तथा व्यवहार पालना गर्ने ।
सामान्य लक्षणका लागि आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर ज्वरो आएमा पारासिटामोल, खोकी लागेमा कफ सिरप वा एन्टिएलर्जिक औषधि खाने ।
सास फेर्न सामान्य गाह्रो भएमा घोप्टो परेर सुत्ने । झ्यालढोका खोल्ने ।
पल्स अक्सिमिटरले पटकपटक अक्सिजनको लेभल नाप्ने । थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्ने । अक्सिजन ९० भन्दा कम हुँदै गएमा अक्सिजन लगाउने वा तुरुन्त अस्पताल जाने ।
कडा लक्षण देखिएमा वा कुनै पनि किसिमको गाह्रो भएमा एम्बुलेन्स बोलाएर कोभिड अस्पताल जाने ।
कुनै गाह्रो नभएमा आइसोलेसनमा बसेको २ हप्तापछि वा कोरोना टेस्ट नेगेटिभ आएपछि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन । स्वाद र गन्ध पुरानो अवस्थामा फर्किन थप केही समय लाग्न सक्छ । संक्रमितमा २ हप्तापछि यो लक्षण रहेपनि अरूलाई रोग सार्न सक्दैन ।
आइसोलेसनको अवधि सकिएपछि आफू बसेको कोठा, कोठाका हरेक सामान तथा बाथरुमलाई विभिन्न निर्मलीकरण गर्ने पदार्थले निर्मलीकरण गर्ने । झ्याल खोलेर हावा तथा घाम खेलेमा छिटो संक्रमणरहित हुन्छ । झ्यालतिर हावा फ्याँक्ने गरी ३ दिनसम्म पंखा चलाउन सकिन्छ ।
कोरोना नरम प्रकृतिको महामारी हो । संक्रमितमध्ये ८५ % व्यक्तिलाई सामान्य लक्षण देखिएर वा नदेखिएर आफैं निको हुन्छ । १० % संक्रमितलाई लाक्षणिक तथा स्वास्थ्यप्रवर्द्धन उपचारले ठीक हुन्छ । ५ % लाई अक्सिजन, एन्टिभाइरल औषधि, एन्टिबायोटिक, प्लाज्माथेरापी, भेन्टिलेटर लगायत सघन उपचारको आवश्यक पर्न सक्दछ । नेपालमा हालसम्म १ % पनि मृत्युदर छैन । दक्षिण एसियामै कोभिड १९ को मृत्युदर कम छ । विश्वमा २ – ३ % मृत्युदर छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश उमेर ढल्केका तथा दीर्घरोग भएका व्यक्ति छन्, तसर्थ कोरोना संक्रमणबारे धेरै चिन्तित हुनु आवश्यक छैन । पर्याप्त सतर्कता, सकारात्मक सोच र उच्च आत्मबलले यो संक्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
केही सञ्चारमाध्यममा एकपटक संक्रमित भएपछि भविष्यमा फोक्सोको रोग, मुटुको रोग लाग्ने वा फोक्सो ड्यामेज हुने भनेर गरिएको प्रचार गलत हो । गम्भीर किसिमको भाइरल निमोनिया भएका वा भेन्टिलेटरमा लामो समय बसेर फर्किएका, बहुप्रकारका दीर्घरोग भएका तथा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमध्ये २८ % मा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या वा मांशपेशी कमजोर हुने समस्या वा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।